आर्मीको जितसँगै सेमिफाइनल समिकरण पूरा – Khel Dainik
आर्मीको जितसँगै सेमिफाइनल समिकरण पूरा
पोखरा (खेलदैनिक) । यहाँ जारी प्रतिष्ठित २०औं आहा! रारा गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको छ । मंगलबार भएको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र रुस्लान थ्रीस्टार क्लबबीचको अन्तिम क्वाटरफाइनल खेलसँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको हो ।
पोखरा रंगशालामा भएको अन्तिम क्वाटरफाइनलमा आर्मीले थ्रीस्टारलाई शून्यका विरुद्ध १ गोलले हरायो र सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्यो । दोस्रो हाफमा वैकल्पिक खेलाडीका रुपमा मैदान प्रवेश गरेका राजिव गुरुङले गरेको सटिक फिनिसिङ गोल नै आर्मीलाई सेमिफाइनलमा पुर्याउन निर्णायक बन्यो ।
निर्णायक गोलकर्ता राजिव गुरुङ नै म्यान अफ द म्याच चुनिए । उनले पुरस्कार वापत नगद ८ हजार र ट्रफी हात पारे । अब दोस्रो सेमिफाइनलतर्फ आर्मीले माघ १३ गतेका दिन मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबको सामना गर्नेछ । प्रतियोगिता अन्तरगत माघ १२ गतेको पहिलो सेमिफाइनल खेल नेपाल एपिएफ फुटबल क्लब र मच्छिन्द्र फुटबल क्लबबीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
सेमिफाइनलदेखि दर्शकको उपस्थिति रहने
त्यस्तै प्रतियोगिताको सेमिफाइनलदेखि दर्शकहरुलाई रंगशालामा प्रवेश दिइने आयोजकले जनाएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड अपनाएर सिमित संख्यामा दर्शकहरुलाई रंगशालामा प्रवेश दिइने आयोजक सहारा क्लबले जानकारी दियो ।
दर्शकहरुलाई टिकट दर तीन सय तोकिएको छ । साथै इच्छुक दर्शकहरुले प्रभु पेमार्पmत अनलाईनमा पनि म्याच टिकट खरिद गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ ।
← आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने नेपाल विरुद्ध मौरिससः एक तिहाई दर्शकले रंगशालामा प्रवेश पाउने →